Nchịkọta Nduzi nke CCNP zuru ezu
Gịnị mere ọ ga - eji bụrụ ihe dị mma ka mmadụ mụta CCNP?
Kedu ihe CCNA ji dị mkpa maka certification CCNP?
Ihe Nleba CCNP bara
N'ime usoro ahụ
Ọzụzụ na CCNP
Cisco Certified Network Professional (CCNP) bụ ọkwa nke si na Cisco. O gbanwee kpamkpam dị ka ihe nkenke bụ isi na ụwa ụlọ ọrụ gbasara nlekọta nke ụlọ. Site na iburu asambodo a bu olile anya nwere ike ime ka ihe ndi ozo nke usoro ochichi di iche iche wee gbasaa iru oru n'etiti nchikota ndi okachamara ndi nwere ike idozi nsogbu nsogbu na nhazi usoro. Onye nwere olileanya ga-abụ CCNA R & S nke ruru eru iji nweta ọzụzụ ọzụzụ a, yana oge 1 ga-etinye aka na nchịkwa usoro ga-abụ ihe atụ ka mma.
Ọ bụrụ na ị na-achọ na ịkparịta ụka n'Ịntanet, CCNP-CCNA bụ ihe kachasị mma iji mụta ịhazi. Ọ zuru oke maka ndị ọkachamara IT na ndị na-emepụta ihe nrịgo nke na-achọ ime ka ọrụ ha dị na ngalaba nchịkwa usoro. (CCNP) Ntugharị na mgbagharị ntinye aka kwadoro ikike ime ndokwa, actualize, kwenye na nyochaa usoro ihe ntinye anya na gburugburu ebe obibi na ịrụkọ ọrụ na ndị ọkachamara maka imebi nchebe. Usoro CCNP kwesịrị ekwesị maka ndị na-erughị otu afọ nke nchịkwa usoro nlekọta nke usoro nchịkwa ndị e guzobere iji mee ka ha nwee ikike ma na-arụ ọrụ n'enweghị nchedo n'usoro usoro ihe dị mgbagwoju anya.
CCNA gụnyere echiche ndị bụ isi na nchịkwa ụlọ. I kwesịrị ịma banyere ihe ndị dị mkpa nke usoro nhazi usoro tupu ị na-agbalịsi ike Ihe nyocha nke CCNP. Mgbe usoro ọzụzụ CCNP na-arụpụta ọrụ, ị ga-enwe ike ịrụ ọrụ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, atụmatụ, ịmepụta ma nyochaa WAN na LAN.
Usoro CCNP nwere ike ịnwe ike ịnwe ike ime ihe, ime ndokwa, nyocha ma nyochaa okwu gbasara usoro usoro mpaghara. Iji mee nke a, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dịkarịa oge oge nhazi usoro nlekọta. Ndị mmadụ nwere ike imecha akwụkwọ a dịka ha gosipụtara ugbu a ikike ha iji jupụta dịka ndị ọkachamara na-emepụta ihe, ndị na-eme ka ndị ọrụ nkà, ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na usoro ihe omume.
Ọzụzụ kachasị mma maka ndị ọkachamara na netwọk, ndị injinia netwọk, ndị nchịkwa netwọk, ndị ọkachamara n'ịkwado Network, ndị na-arụ ọrụ na System, ndị na-elekọta netwọk, ndị na-arụ ọrụ na System na ndị na-elekọta Network. Tupu ịme ihe a, ọ dị mkpa ka ị mara Nkà na Ịzụ Ngwá Ọrụ, CCNA ma nwekwuo mkpa mmụta nke nchịkọta usoro. A na-achọpụta banyere TCP / IP, yana oge 1 ga-etinye aka na nchịkọta usoro ga-abụ uru ọzọ.
Inwe akwụkwọ ntinye CCNP egosiputa ọkwa dị elu n'ọchịchị nke mgbanwe na ịchịgharị, dịka ekwuru tupu ihe ọ bụla ọzọ. Mgbe ịchọrọ ọrụ maka onye ahịa ikpeazụ ahụ, onye na-eme atụmatụ na Cisco na-aza azịza a n'ụzọ a na-apụghị ịgbagha agbagha. Ọ bụ maka iwu na nzube niile ka ị nweta asambodo iji soro onye na-emekọrịta ihe ma ọ bụ na Cisco. Mgbe ọzọ, ọ bụ ọbụna akụnụba dị mma mgbe ị na-emeso ndị ahịa, dịka nkwenye.
Asambodo ahụ na-agba ndị na-arụ ọrụ bara uru ka ha wee nwee ike ịhazi ya na nchịkọta nke ụlọ ọrụ. Kedu ihe ọzọ, ọ na-eme ka ọrụ nke mgbasa ozi gbasara ọzụzụ nchịkwa nke ụwa dị ugbu a.
Asambodo a ga - etinyekwa aka na gi inwe ndokwa kariri karia ugwo nke a ga-akwụ gi dika onye okachamara. Ọ ga-enyere gị aka site na nlekọta nchịkwa ndị ọkachamara dị iche iche na-eme ka ndị enyi dị iche iche kwụọ ụgwọ iji kwụọ ụgwọ. Ịnwere ike ịga ọzọ mile ma wepụ ule nyocha ụda olu nke ga-enye gị ike ijikwa ma olu ma data na mpaghara nke telecom.
N'ime usoro a, enwere n'aka na usoro nchịkwa nke usoro nchịkwa nke gụrụ akwụkwọ, dịka ọmụmaatụ, iwebata, ịhazi, ime ma nyochaa usoro nlekọta usoro nchịkwa dị iche iche na LAN na WAN.
Ịgbakwunye otu ekele maka usoro a nke a kwadoro bụ CCNP nche, nke bụ na mpaghara alaka ụlọ ọrụ nke Cisco kwadoro ndokwa nke ọma. Ndị na-achọ ọrụ nchekwa a ga-achọpụta ọtụtụ ụlọ ọrụ na ahịa. E wezụga na nke a, CCNP Voice bụ ihe dị mkpa nke usoro nchịkọta zuru oke nke na-eme ka ọnụ ọgụgụ mmadụ dị ukwuu n'ụwa.
CCNP R & S bụ ihe dịpụrụ adịpụ n'etiti ndị kachasị anya maka nchịkọta usoro nchịkwa usoro ụbọchị ndị a. Ọganihu mmụta na nkwenye nke ahụmịpụtara nke dị mkpa dị mkpa na ihe ngosi ngosi ọhụrụ na-eme ihe ike.
Ugbu a, mgbe nchebe Ịntanetị bụ ihe kachasị ike iji dochie, ịnweta akwụkwọ asambodo na ntanetụ nwere ike iweta ọtụtụ ntụgharị na ihe a pụrụ ichepụta. Ebumnobi kachasị mma bụ nchebe. Mgbe ị nwetara asambodo a, ịnwere ike ịghọ onye na-ahụ maka nchebe Ịntanetị nke nwere ike inyere ndị isi azụmahịa, ndị mmadụ n'otu n'otu, ntọala na mkpakọrịta site na iwe egwu dị ka ndị mmemme na ọrịa.
Ego ma ọ bụ obere, ego na mmezu ọrụ bụ ihe abụọ dị ịrịba ama na-esite n'aka ndị ọkachamara ịhọrọ usoro a. Mgbe ha na-achọ ịmebanye onwe ha na ngalaba nchịkọta usoro, ọ bụ otu ụzọ zuru oke. Ọ na-eme ka ịmara otú njikwa nke usoro dị ukwuu na-ada n'ime njide mmadụ. Nchedo weebụ bụ ubi na-enweghị atụ nke dị oké mkpa nke ndị ọkachamara.
Nchọpụta Nchọpụta Ọhụrụ ọhụrụ bụ ihe dị iche iche na-eweta ọzụzụ ọmụmụ ihe dị iche iche maka òtù. Nnukwu ọzụzụ na nchịkọta usoro na-enye ndị ọkachamara ohere ịbawanye ozi na ngwa dị mkpa maka ndị ahịa mara mma.